गुगलले सार्वजनिक गर्यो एन्ड्रोइड ११, के छन् नयाँ विशेषता ? - Everest Dainik - News from Nepal
गुगलले सार्वजनिक गर्यो एन्ड्रोइड ११, के छन् नयाँ विशेषता ?
काठमाडौंः गुगल कम्पनीले गत फेब्रुअरीमा घोषणा गरेको एन्ड्रोइड–११ अपडेट मंगलबारबाट सुरू गरेको छ। शुरुमा गुगलको पिक्सेल स्मार्टफोनका लागि मात्र उपलब्ध यो नयाँ एन्ड्रोइड अपडेट आउने हप्ताहरूमा केहि अन्य प्रयोगकर्तालाई पनि उपलब्ध हुने छ ।
नयाँ अपडेट आएपछि ओप्पो, जियोनी, वन प्लसजस्ता धेरै स्मार्टफोन ब्रान्डहरू आफ्ना नयाँ मोडेलहरूमा नयाँ संस्करणहरू समाहित गर्न लागि परेका छन् । एन्ड्रोइड ११ ले पहिले भन्दा २० प्रतिशत छिटो अनुप्रयोग (एप्लिकेसन) हरू सुरूवात गर्दछ ।
के छन् विशेषता ?
१. स्क्रीन रेकर्डिङ
नयाँ अपडेटमा स्क्रिन रेकर्डिंग सुविधा स्क्रिनसटसँग मिल्दोजुल्दो छ, जहाँ प्रयोगकर्ताले उनीहरूको स्क्रिन गतिविधिलाई भिडियोको रूपमा रेकर्ड गर्न सक्नेछन् । यद्यपि यो सुविधा धेरै स्मार्टफोनमा यसअघि नै राखिएको थियो । यसका साथै पूर्वस्थापित स्क्रिन रेकर्डिंग विकल्पसँगै प्रयोगकर्ताहरूले सजिलैसँग फोनको सहायताले ट्यूटोरियल भिडियोहरू बनाउन सक्नेछन् ।
याे पनि पढ्नुस फेसबुक र गुगलले विरोध गरेको कानुन अस्ट्रेलियामा पारित
२. कुराकानी गर्ने नयाँ तरीका
एन्ड्रोइड १० मा स्क्रिनमा स्वाइप गर्दा सूचना पट्टी तल आउँथे । एन्ड्रोइड ११ मा भने अब यो दुई भागमा विभाजन हुनेछ । पहिलो भागमा तपाईंको सूचनाहरू हुनेछन्, जबकि दोस्रो (रूपान्तरण) भागमा च्याट हुनेछ । रूपान्तरण भागमा व्हाट्सएप, मेसेन्जर र ट्विटर जस्तै अनुप्रयोगहरुको लागी च्याट नोटिफिकेसन आउनेछ ।
सामाजिक सञ्जालका नोटिफिकेसन र मेसेजबीचको अप्ठ्यारोपनालाई यसले सहज बनाएको छ । यो मात्र होईन, तपाईं च्याट बबल पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले यस बबललाई फेसबुक मेसेन्जरमा देख्नुहुनेछ । यसको मद्दतले तपाईं अर्को एप्लिकेसन चलाउँदा पनि सामाजिक सञ्जालमा जवाफ दिन सक्नुहुनेछ ।
स्मार्ट होम उपकरण एन्ड्रोइड ११ का केहि सुविधाहरूले फोनमा होम एसी, फ्रिज र टिभी जस्ता उपकरणहरू नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ । नयाँ संस्करणमा प्रयोगकर्ताहरूले यो विकल्प खोल्नको लागि केवल पावर बटनमा लामो थिचे पुग्नेछ । नयाँ सुविधा बेडटाइम मोड पनि समावेश गरिएको छ । यदि रातमा प्रयोगकर्ताले यो सुविधा खोलेमा भने डिस्टर्ब नगर्नुहोस् मोड सुरु हुन्छ र फोनको स्क्रिन कालो र सेतो हुनेछ ।
अपरेटिंग सिस्टमलाई नयाँ संस्करणमा अपडेट गरेपछि प्रयोगकर्तालाई ब्लुटुथ स्पिकर वा अन्य उपकरणमा गीतहरू सुन्न सजिलो हुनेछ । यदि तपाईं एयर प्लेन मोड सुरू गर्नुभयो भने तपाईंको ब्लुटुथ उपकरण फोनमा जडान हुनेछ र तपाईंले यसलाई फेरि र फेरि जोड्नुपर्दैन ।
याे पनि पढ्नुस ‘गुगल र फेसबुकले समाचार प्रयोगबापत भुक्तानी गर्नुपर्छ’
ह्यान्डल गर्ने एप्लिकेसन (अनुप्रयोग)हरूको समस्या समाप्त
एन्ड्रोइड ११ अद्यावधिक हुनुअघि यदि प्रयोगकर्ताले अनुप्रयोगलाई आफ्नै अनुसारको स्थानमा राख्न चाहेमा पहिले फोल्डर सिर्जना गर्नुपथ्र्यो । एन्ड्रोइड ११ मा भने स्मार्ट फोल्डर रहेकोल फोनले स्वचालित रूपमा एपहरुको काम अनुसार अनुप्रयोगहरू आफै मिलाउने गर्दछ । जस्तै खेल फोल्डरमा खेलहरू ।
कुन स्मार्टफोनले पाउँछन् नयाँ अपडेट ?
एन्ड्रोइड ११ अपडेट केवल केही ब्रान्डको स्मार्टफोनमा खुला गरिएको छ । यस गुगल पिक्सेल, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी, श्याओमी, नोकिया शामिल छन् ।
ट्याग्स: एन्ड्रोइड–११, गुगल